Maxaa Turkiga, Ruushka iyo Suuriya ka dhigay isku aragti? - BBC News Somali
Xiriirrada diblomaasiyadeed iyo kuwa milatari ee u dhaxeeya waddamada Turkiga, Ruushka iyo Suuriya ayaa muujinaya in waddamadani ay arrimo badan ka mideysan yihiin, balse su'aasha ayaa ah muddada ay arrintan sii socon karto?
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la kulmay dhiggiisa dalka Turkiga, si uu u muujiyo in xukuumadda Moscow ay dowr muhiim ah ku leedahay xasilloonida gobolka.
Ciidamada Ruushka iyo kuwa Turkiga ayaa dhawaan si wada jir ah roondo uga sameyn doona deegaannada dhawaan lagu heshiiyay in laga sameeyo aag nabdoon.
Maxaa Trump ku khasbay inuu cuna qabateynta ka qaado Turkiga?
Ruushka oo ciidamo geynaya xadka Turkiga iyo Suuriya ay wadaagaan
Trump on Turkey ceasefire: "This was an outcome created by us, the United States."
Dhanka kale, baabuurta ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee laga daabulayo woqooyi bari Suuriya ayaa qashin iyo khudaar boloshay lagu sagootiyay xilli ay ka baxeen garabka Kurdiyiinta ay muddada isgarabsanayeen.
Duullaanka Turkiga uu ku qaaday Suuriya iyo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Suuriya ayaa saameyn weyn ku yeelan doono dowladda Suuriya iyo guud ahaan gobolka.
Saameyntaasi ayaa noqon karta mid deg deg ah iyo mid mustaqbalka dambe ah.
Isbaddalkaasi ka dhacay dalka Suuriya ayaa ugu horreyn ah guul u soo hoyatay waddamada Turkiga, Ruushka iyo Suuriya.
Turkiga ayaa helay inta badan wixii uu doonayay, taa oo ka dhigan in ciidamadiisa iyo maleeshiyaadka daacadda u ah ay sii joogi doonaan deegaannadaasi ku yaal gudaha dalka Suuriya ee ay haatanba maamulaan.
Ruushka iyo Suuriya ayaa u muuqda in ay ogolaadeen in xoogagga Kurdiyiintu ay isaga baxaan dhul ballaaran oo ku teedsan xudduudda laba dal.
Ruushka ayaa taageeradii milatari ee uu u fidiyay dowladda Suuriya u baddalay in uu yahay waddan dowr muhiim ah ku leh arrimaha siyaasadda ee dalka Suuriya. Taa oo micnaheedu yahay, in Ruushku uu noqonayo waddanka kaliya ee shisheeye ee awood u leh in heshiis noocan oo kale ah laga gaaro colaadda Suuriya.
Ruushka ayaa haatan ku soo laabtay saaxada siyaasadda bariga dhexe. Inkastoo dhibaatooyin ba'an ay ka dhasheen duqeymihii uu ka geysanayay gudaha Suriya, haddana waxa uu u muuqdaa in uu yahay saaxib la isku hallayn karo marka loo eego Mareykanka.
Guusha ay gaartay dowladda Suuriya ee madaxweyne Bashar Al-Asad ayaa ah in xukunkeeda uu mar kale gaaray deegaannada ku yaal dhanka woqooyi ee dalkaasi, inkastoo haddana ay u oggolaatay dhulkeeda in ay sii joogaan ciidamada Turkida.
Heshiiskaasi u dhaxeeya Turkiga, Ruushka iyo dowladda Suuriya ayaa noqonaya tallaabo loo qaaday dhanka soo afjaridda colaadda sokeeye ee dalkaasi oo dad badan ay filayeen in aan laga gun gaari doonin xilli dhow.
Waddamada Turkiga, Ruushka iyo Suuriya ayaa hadda laga yaabaa in ay isku aragti ka yihiin arrimaha gobolka balse su'aasha ayaa ah muddada ay arrintaasi sii jiri doonto? Turkigu muddo intee dhan ayuu gacanta ku sii hayn doonaa dhulka Suuriya ee uu haatan maamulo? Kurdiyiintu wax dowr ah ma ku yeelan doonaan siyaasadda gudaha ee Suuriya? Inkasta oo ay dhibaato wajahayaan, haddana suurtagal ma tahay in ay u hoggaansamaan taliska Ruushka iyo Turkiga? Maxaa kale oo fursad ah oo u furan?
Haddii Kurdiyiintu ay noqdaan kuwa guuldarrada ugu weyn ay ka soo gaartay loollanka ka jira gudaha Suuriya, Mareykanka soo lama oran karayo waxaa soo gaaray fashil diblomaasiyadeed oo weyn.
Madaxweyne Trump ayaa laga yaabaa in uu ku saxan yahay in uu soo afjaro colaadda Mareykanka uu ka wado gobolka bariga dhexe, arrintaa oo aad looga soo dhaweynayo gudaha dalkaasi Mareykanka. Balse waxaa jira qaabab kale oo arrintaasi loo sameyn karo. In Mareykanka uu si lama filaan ah ula baxo ciidamadiisa oo uu ka baxo garabka xulafadiisa ayaa ah farriin aad u xun, xilli shaki la gelinayo sumcadda Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe.
Qaabkii Mareykanka uu u wajahay weerar la sheegay in dowladda Iiraan ay ku qaadday warshadaha saliidda ee dalka Sucuudiga ayaaba xaaladda uga sii dartay. Weerarkaasi oo muujiyay nugeylka dhaqaale ee dalka Sucuudiga ayuusan Mareykanka ka bixin jawaabtii laga filayay.
Russian military police vehicles were seen in Kobane on Wednesday
Xukuumadda Washington ayaa u muuqata in ay ku faraxsan tahay in Sucuudigu uu hormuud ka noqdo xasaradda ka taagan gobolka, waxayna la soo raagtay gurmadkii diyaaradaha dagaalka ee uu ku xoojinayay difaaca hawada Sucuudiga.
Dad badan oo ku nool waddamada Khaliijka iyo Israa'iil ayaa ku doodaya in mararka qaar madaxweyne Trump uu u hadlo si adag balse uusan qaadin wax ficil ah. Arrintaasi ayay marar badan ka hadleen dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda dibadda ee Mareykanka iyo diblomaasiyiintuba, kuwaa oo dhammaantood ku doodaya in arrimaha siyaasadda dibadda ee madaxweyne Trump aysan ku dhisnayn qorshe ama istaraatijiyad.
Arrintan ayaa aad uga duwan tan uu tiigsanayo dhiggiisa dalka Ruushka oo uu loollan adag kala dhaxeeyo. Madaxweyne Putin ayaa kaalmadii milatari ee uu u fidiyay xukuumadda madaxweyne Asad waxa ay ka dhigtay nin dowr muhiim ah ku leh arrinta gobolka, waxa uuna aad u soo dhaweystay dalka Turkiga oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan gaashaanbuurta NATO. Turkiga ayaa in muddo ahba aad uga soo horjeeday is-xulufeysiga Mareykanka iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta.
Xaqiiqada ah in guulaha Ruushka uu ka soo hooyay siyaasadda gobolka ay ka dhasheen guuldarrooyinka Mareykanka, haddana lama filayo in wax weyn ay ka badali doonaan saameynta Mareykanka ee gobolkaasi.
Turkiga ayaa ka careysiiyay xubnaha kale ee NATO, xilli gaashaanbuurtaasi ay 70 sano jirsatay, waxaana xubno badan ay walaac ka muujiyeen waxa Turkigu uu u arko halis amni. Turkiga ayaa u muuqda in uu ka sii fogaanayo xubnaha kale ee NATO, wuxuuna horraantii sanadkan qaaday tallaabo lama filaan ah oo ahayd in uu habka difaaca gantaallada ka soo iibsaday dalka Ruushka. Arrintaa ayaa ahayd mid marnaba aan laga filayn waddan xubin ka ah gaashaanbuurta NATO.
Haddii ay sii socoto gebidhaca istaraatijiyadeed ee Washington, saameynta ka dhalata arrintaasi ayaa noqon doonto mid cawaaqibkeeda leh. Dhanka waddamada Khaliijka marka la eego, ifafaalada ka soo baxaysa Sucuudiga iyo xulufadiisa ayaa u muuqda in ay eegayaan suurtagalnimada in ay soo dhowaystaan Iiraan. Balse si taa ka duwan, Israa'iil ayay u dhowdahay in ay dagaal xooggan la gasho Iiraan. Xukuumadda Tehran ayaa laga yaabaa in Israa'iil ay u aragto in Mareykanka uu garabkeeda ka baxay. Lama hubo in ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Suuriya ay shaki ku abuurtay Israa'iil iyo in kale.
Waxa kale ee aan ilaa haatan la ogayn ayaa ah saameynta xasaradda ka jirta woqooyi bari Suuriya ay ku yeelan doonto kooxda la baxday Dowladda Islaamka ee Daacish. Cabsida weyn ee ay qabaan waddamada reer galbeedka ayaa ah in kooxdaasi ay dib isu soo abaabusho, iyadoo la sheegay in dhawaan xubno badan oo ka tirsan dagaalyahannada kooxdaasi ay xabsiyada ka baxsadeen.
Su'aasha ayaa ah ciidamada Turkiga, Suuriya iyo Ruushku ma awoodaan in ay xakameeyaan kooxdaasi oo aysan mar kale isa soo abaabulin?
Siyaasad ahaan, xaaladda ayaa haatan mareysa marxaald kala guur ah oo waxaa haatan ku gacan sarreeya Ruushka. Balse haddii aad loo faaqido, waxaa kuu soo baxaya in Turkigu uusan helin dhammaan waxyaabihii uu doonayay. Ruushku waligii xiriir aan cago buuxa ku taagnayn ayuu la lahaa Turkiga iyo Suuriya, halka ay iska caddahay in Iiraan iyo xukuumadda Dimishiq aysan marnaba ku faraxsanayn duullaanka Turkiga uu ku qaaday woqooyi bari Suuriya. Waxaase furan fursado badan oo ay isku khilaafi karaan, kuna sii kala fogaan karaan waddamadan haatan xulufada ahi.